Ihe Ndị A Na-atụ Anya Ga-eme n’Ọdịnihu | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2015
Àgwà Ọma Ha Mere Ka Ha Nwee Aha Ọma
Ndịàmà Jehova ekwusaala ozi ọma na Dọminikan Ripọblik ihe dị ka afọ iri asaa. Kemgbe ahụ, àgwà ọma ha emeela ka ha nwee aha ọma. Ọ na-abụ ndị mmadụ hụ ụmụnna anyị n’ozi ọma, ha asị ha nye ha akwụkwọ anyị. Ndị mmadụ na-agwakarị ha, sị: “Chọọchị unu dị mma” ma ọ bụ “Unu na-eme ihe Baịbụl kwuru.”
E nwere otu ihe mere mgbe a chọrọ ịrụ Ụlọ Nzukọ Alaeze n’ala otu nwanna nyere ọgbakọ. Mgbe nwanna a gara ideba ala ahụ n’akwụkwọ, ọ chọpụtara na e nweela onye ji aghụghọ deba ya n’akwụkwọ. Onye ahụ boro nwanna anyị ebubo na ọ chọrọ ịnara ya ala ya. N’ihi ya, e wepụrụ okwu ahụ n’ụlọikpe. Okwu a abụghị obere okwu n’ihi na nwoke ahụ nwere akwụkwọ ala ndị o ji na-egosi na ala ahụ bụ nke ya. Akwụkwọ ala ndị ahụ bucha aha ya.
Mgbe ikpe ahụ na-aga n’ihu, ọkàikpe na-ekpe ikpe a jụrụ ọkàiwu nwanna anyị kpọrọ ka o kwuo kpọmkwem onye ọ na-ekpechite ọnụ ya. Ọkàiwu ahụ kwuru na ọ bụ ụlọ ọrụ Ndịàmà Jehova. Ọkàikpe ahụ kwuziri, sị: “Ọ bụrụ otú ahụ, ihe niile unu kwuru gbasara ala a bụ eziokwu. Ama m Ndịàmà Jehova nke ọma, amakwa m na ha na-akwụwa aka ọtọ. Ha enweghị ike igwu mmadụ wayo, ma ọ bụ nara mmadụ ihe ya.”
Mgbe a na-ekpe ikpe a, nwoke ahụ wepụtara akwụkwọ ndị ọ sịrị gosiri na ọ bụ ya nwe ala ahụ. E nyochara akwụkwọ ndị ahụ ma chọpụta na ha bụ akwụkwọ adịgboroja. N’ihi ya, ọkàikpe ahụ kpelaara Ndịàmà Jehova ikpe ahụ. Ọkàiwu ahụ na-ekpechitere Ndịàmà Jehova ọnụ ha sịrị: “Ihe a abụghị mbụ ụdị ihe a na-eme. Mgbe ọ bụla a kpọtụrụ aha Ndịàmà Jehova n’ụlọikpe ndị e nwere n’obodo a, ndị mmadụ na-ekwu okwu ọma banyere ha.”
Anyị amabeghị mmadụ ole na Dọminikan Ripọblik ga-emecha mụọ Baịbụl ma bata n’ọgbakọ. Ma ka ọ dị ugbu a, ụmụnna anyị na-agbalị izi ndị chọrọ ịmụ Baịbụl ozi ọma. Dị ka ihe atụ, n’afọ 2013, Ndịàmà Jehova nọ na Dọminikan Ripọblik ji ihe karịrị nde awa iri na otu zie ndị mmadụ ozi ọma. Mmadụ ole ha mụụrụ Baịbụl dị puku iri asaa na otu, narị itoolu na iri abụọ na abụọ. Ndị rụrụ ọrụ ọsụ ụzọ n’afọ ahụ dị puku itoolu, narị asaa na iri asaa na isii. N’ọnwa Ọgọst afọ ahụ, ndị nkwusa dị puku iri atọ na ise, narị atọ na iri atọ na otu jesiri ozi ọma ike. Otu narị puku mmadụ, iri puku abụọ na asaa, narị asaa na iri na isii bịara Ncheta Ọnwụ Jizọs. Nke a gosiri na ọtụtụ ndị ka ga-abata n’ọgbakọ.
Ndịàmà Jehova ekwusaala ozi ọma ọtụtụ ebe na Dọminikan Ripọblik kemgbe ahụ Nwanna Lennart Johnson na nwunye ya Virginia bidoro ikwusa ozi ọma na Dọminikan Ripọblik, n’ụbọchị Sọnde, n’ọnwa Eprel afọ 1945. Ndịàmà Jehova nọ na Dọminikan Ripọblik ejighị ozi ọma ha na-ezi egwu egwu. Obi dịkwa ha ụtọ maka mbọ ndị mbụ kwusara ozi ọma na Dọminikan Ripọblik gbara. Ma, ihe na-eme ha obi ụtọ karịchaa bụ na ha ‘na-agba àmà nke ọma banyere alaeze Chineke.’ (Ọrụ 28:23) Ụmụnna anyị ndị Dọminikan Ripọblik na-atụsi anya ike mgbe mmadụ niile nọ n’obodo ha ga-eso Ndịàmà Jehova nọ n’ụwa niile na-abụ abụ, sị: “Jehova aghọwo eze! Ka ụwa ṅụrịa ọṅụ. Ka agwaetiti niile ṅụrịa ọṅụ.”—Ọma 97:1.
Otú Ebe E Mepere Maka JW.ORG Si Baa Uru
E mepere ya n’ebe a na-edosa akwụkwọ. Puku mmadụ anọ, narị asaa na iri abụọ na atọ bịara ebe ahụ naanị n’ime abalị iri na abụọ.
Ihe fọrọ obere ka o ruo narị mmadụ anọ bịara ebe ahụ n’ụbọchị ọ bụla.
Narị mmadụ abụọ na iri isii na ise kwuru ka a bịa mụwara ha Baịbụl.
E gosiri otu puku mmadụ na otu narị na iri ise na itoolu otú ha ga-esi achọta ihe na jw.org.